Maxaa soo celceliyay dilalka lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee Koofur Afrika? – Bandhiga
Maxaa soo celceliyay dilalka lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee Koofur Afrika?
Wararka laga helayo dalka Koofur Afrika ayaa waxa ay sheegayaan in Koox Burcad Koonfur Afrikaan ah, ku dileen muwaadin Somaliyed gudaha dalkaasi, kadib markii ay rasaas ku fureen, isaga oo ku sugan goobtiisa ganacsiga.
Marxuumka la dilay Allaha u naxariistee, waxaa lagu magacaabi jiray Hillaal Xirsi Jaamac, wuxuuna dilkiisa ka dhacay Magaalada Cape Town, gaar ahaan xaafadii uu ka daganaa Magaaladaasi ee Hanover Park.
Kooxdii Burcadda ee falkaasi dilka ah gaysatay ayaa ka baxsatay goobtii ay ku dileen muwaadinka Somaliyed, iyadoo tani qayb ay ka tahay tacadiyada dadka Somaliyed ay kala kulmayaan dalka South Afrika.
Ganacsatada Soomaalida ayaa la sheegaa in ay ka raqiisan yihiin badeecad iyo agabkaleba dadka asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi ee ganacsiga ku leh sidoo kale waxaa dilalka qeyb ka ah ajaanibta kale ee dalkaasi ka ganacsata, oo kooxaha wax dila lacag ku siiya.